table ရဲ. td ထဲမှာ data ကို fixed ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ - MYSTERY ZILLION
table ရဲ. td ထဲမှာ data ကို fixed ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ
January 2012 edited January 2012 in PHP
ဟိုင်း... table ရဲ. td ထဲမှာ data ကို fixed ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ.. မြန်မာဖောင်.ရော english fontရောဆိုတော. string length ကို ဘယ်လို ရေးပြီး ဘယ်လိုခွဲရမယ်မသိလို.ပါ။
what do you mean ? <td width="200px">data</td> will be width 200 px.
ဟုတ်..အကိုစေတန်.. tableထဲကို databaseထဲက data ကိုထုတ်ပြတာမှာ td ရဲ. width ဆန်.သလောက်ပဲ ထုတ်ပြချင်တာ။ အဲဒါ eng font ဆို string length နဲ. ဖြတ်ပြီး ပြချင်တဲ. char အလုံးအရေအတွက်သတ်မှတ်ပြီး ပြတယ်လေ။ အဲဒါ ခု db ထဲက english font ရော myanmar font ရော ဆိုတော. ဘယ်လို ခွဲပြီး ပြရမလဲမသိလို.ပါ။ အရင်က eng font ဆိုရင် အလုံးရေ ၂၀၀ က ညီမရဲ. td မှာ fix ဖြစ်ပေမဲ. myanmar font ကိုရေတာကျ fix မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေလို.။ အဲဒီ၂ခုကို ဘယ်လို ညှိရလဲသိချင်တာပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ထပ်ဖြေပေးပါနော်။
you should use CSS, text-overflow: ellipsis;